Abantu abaningi baye wezwa ukulwela amalungelo kanye nokunyakaza labesifazane amalungelo abo. Futhi iningi uqonde ukuthi isizathu lena abutment emphakathini wezinzalamizi ezazikhona Emhlabeni eminyaka. Mayelana-ke kulesi sihloko ufuna ukukhuluma.
Okokuqala kumele qiniseka bavisise. Ngakho, liyini ngebulili? Inchazelo Lithi kuyinto uhlobo nobudlelwane bokuhlalisana, lapho kummeleli ubulili namandla, t. E. Owesilisa, kunendima ethile ekugcineni ovelele kule nomndeni isimo. Uma sicabangela lokhu umqondo ngokombono theory ubulili, lapha singakwazi ukuxoxa ngakho uhlobo oluthile ukulawula abesifazane, ukubandlulula esekelwe ocansini. Ungase futhi zama lwaleli Hlela umusho owodwa, okwakuyoholela ufunde kanje: ingcindezelo yabantu phezu abesifazane.
Efuna ukuze aqonde ukuthi yini ngebulili, udinga idiphu kancane emlandweni le nkinga. Ososayensi abaningi bathambekele bakholelwa ukuthi yoke imiphakathi ekhona babe wezinzalamizi kakhulu. Nokho, abanye ochwepheshe baye bame kwelokuthi umphakathi Neolithic futhi Paleolithic (okuyinto 5-7 yeminyaka BC) ngokuvamile ubulili bayalingana. Kukhona umbono ezandulela matriarchy ngebulili (esimisweni sezenhlalo, lapho izikhundla evelele elalihlala abesifazane kuphela). Nokho ososayensi abaningi ukuphika lokhu qiniso, lapho lithi kuphela ukuthi ukubusa wesilisa - kungcono cishe Isenzakalo esingokwemvelo, okumele ichaze lokho okushiwo yinkulumo nobudlelwane bokuhlalisana ngaso sonke isikhathi futhi kuzo zonke izizwe.
By endleleni, ngale wathi sefilosofi isazi sezokuhlalisana kwabantu, efana Giddens. Wayekholelwa ukuthi umehluko nge-okubusa, yebo, kwakunamandla kangakanani, kodwa lapho ayikaze umphakathi lapho bonke mbuso wawuyoqhubeka basonta abesifazane. Kodwa wabe ezama ukuthambisa Uveza umbono wakhe, ethi ukuthi zonke esekelwe imisebenzi yemvelo wobulili besifazane. Njengoba abesifazane ukuba ithwale futhi ubelethe izingane ziyabanakekela eminyakeni yokuqala yokuphila, ziba ngokwezimali nangokomzimba sincike ubulili namandla. Lokhu, ngendlela, kusho umcwaningi othile waseCanada O'Brien, ethi division sokuqala zomsebenzi, wabeletha ngebulili njengoba kungenzeka kuphela sokusinda ohlelweni.
Njengoba kahle, ngempela?
Ngakho, liyini ukubuswa ngamadoda kanye matriarchy? Kuyinto uhlelo social lapho izikhundla evelele elalihlala noma amadoda noma abesifazane. Kodwa ingabe inembile tiyori ngenhla - ayaziwa, ngoba akekho kubo engakaze yokutholwa ngokusemthethweni. Iyodwa into esiqiniseka ngayo, ukuthi ezinsukwini zika okubizwa ngokuthi umphakathi wendabuko nokwahlukaniswa kwemisebenzi senziwa, okuyinto, by the way, ekugcineni kwahlaluka ukuthi kude okulingana. Owesifazane wahlala ekhaya nomndeni, kanye nazo zonke izinto eziphathelene nabo. Le ndoda yanikezwa emhlabeni ngaphandle ngayo yonke izintelezi yayo - lokusungula, imfundo, isiko, ukubusa. Futhi phikisana ukuthi nzima.
Iqiniso ngenxa kuwufanele ethi lo mkhuba uye waqhubeka okwamanje. Futhi ngenkathi okungukuthi ngebulili, aziwa abesifazane kakhulu, ekubhekaneni idatha izinhlelo okwamanje cishe kungenakwenzeka. Isiko eminyaka ubudala ukhona, kanye namandla igxilile amadoda Sekuyizinkulungwane zeminyaka - ukushintsha konke lokhu nokunye ukufeza ukulingana ngokobulili namuhla akunzima kuphela kodwa futhi engenzeki isimiso. Imizamo yokuqala benziwa ngisho phezu isifazane, ukulwela amalungelo anjalo (ekuqaleni - suffragette ukunyakaza). Namuhla, abesifazane baqala ukulwa akuyona amandla, kodwa okungenani ukulingana ne amadoda (theory ubulili), ngoba siqaphela ukuthi kufinyeleleke kakhudlwana futhi eduze umgomo.
Ukwazi lokho okufundiswa ngebulili, kuyafaneleka ukuba akhulume iqiniso lokuthi amandla zabesilisa esidluliselwa kubo bonke izakhi emphakathini. Ummeleli we-ubulili namandla ngokuyinhloko umndeni - lo mkhuba likhona cishe kuzo zonke izizwe, kuphela ezinye - ne ukubhuka ezincane. Futhi, amadoda kuphela kuwo wonke amazwe asethuthukile at apharathasi kwamandla, abesifazane kwezombusazwe bayavuma akuvamile futhi ngokungathandi. ubuchwepheshe Iningi, ikakhulukazi enomlando omude - besilisa: odokotela, amaphoyisa, njll It kubhebhethekisa ukubuswa ngamadoda kanye imodeli lemfundo. Indoda kumele ibe namandla, kusukela ingane isencane abafana batshelwa ukuthi kuwo wonke igcina. Owesifazane angaba namandla okuwunikela ubuthakathaka ahlukahlukene, ngokwazi ukuthi liyohlala ukusekela ehlombe lalo yesiqhwaga.
Iqiniso lokuthi ngebulili ezinjalo, wazi ngokuzibonela futhi izikhulu zesonto. Kwakuqala ngqá ukuba isonto ezweni hhayi run by abesifazane. Umkhawulo ukuthi avunyelwe, - ukuba abbess. Predominating endaweni efanayo ezingeni zenkolo eyakhe kuphela amadoda. Futhi uma umbuzo ukulingana ngokobulili bese lifinyelele ezinye sphere yezwe yokuphila, ezifana umndeni noma ezombusazwe, esontweni, ngalo mqondo namanje zivalekile.
ESontweni Lobu-Orthodox igama elithi "inzalamizi" kusho umfundisi isihloko, okuyinto has igunya eliphakeme isonto. ERussia kukhona eMoscow (Russian) ngebulili, lingelikaJehova Lobu-Orthodox LaseRussia - Lobu-Orthodox LaseRussia, okuyinto kuleli hora main uMbhishobhi Omkhulu Kirill. Lena isonto amadala namasiko alo, okuyinto isikhathi eside, ephethe isikhundla evelele kusukela ezinsukwini Kievan Rus. Futhi, isibonelo, futhi enye inhlangano isonto futhi ku Ukraine, okuyinto Kuvezwe akunjalo kudala. Lokhu Kiev Sabefundisi, enomnikazi Ukrainian wezinzalamizi Church (PCM) nenhloko yalo - UMbhishobhi Omkhulu Filaret.
Goddess laseGibhithe: amagama, izithombe. I onkulunkulu nonkulunkulukazi waseGibhithe lasendulo: uhlu
Ukhwekhwe: Isifo, izimpawu kanye nokwelashwa.
Imibono Interesting ekhaya: awapheli fancy
Bulgaria Ihhotela (Albena). Ihhotela 4 *, Albena izithombe, amanani kanye nokubuyekezwa of izivakashi ezivela eRussia